एउटै विद्यालयका २५ जना विद्यार्थीमा को-रोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द ! – Patrika Nepal
एउटै विद्यालयका २५ जना विद्यार्थीमा को-रोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द !
मंग्सिर १७, २०७८ शुक्रबार 76
एउटै विद्यालयका २५ जना विद्यार्थीमा को-रोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द ! विदेशमा को- रोनाको तेस्रो भेरियन्टको त्रा- स बढिरहेको सन्दर्भमा बागलुङमा को- रोना सङ्क्रमणदर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ ।
बिहीबारमात्रै बागलुङमा एकै विद्यालयका २५ जनामा को- रोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै समुदायस्तरमा बिहीबार नै तीन जनामा को- रोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको बलेवास्थित एक विद्यालयमा को- रोनाको लक्षणपछि ८२ जनाको परीक्षण गर्दा एकसाथ २५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार विद्यालयमा पुनः शुक्रबार थप विद्यार्थीको को- रोना परीक्षणपछि मात्रै विद्यालयको नाम खुलाइने छ ।
घिमिरेका अनुसार विद्यालय भएको समुदायको तीन जनामा समेत को- रोना पुष्टि भएकाले धेरै मात्रमा समुदायमा को- रोना सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ । त्यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यालयको टोली शुक्रबार जाने र अवस्था बुझेपछि जिल्लास्तरीय को- रोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने जनस्वास्थ्य निरीक्षक घिमिरेले बताउनुभयो ।
Prevगायिका रचना रिमाल ३.४४ जिपिए सहित १२ कक्षा उत्तीर्ण
Nextट्याक्सीको मनोमानी भाडा रोक्न त्रिभुवन विमानस्थलमा सटल बस सेवा सुरु
साउदी अरेबियाले छिमेकी देश यमनमा आ´क्र´मण गर्‍यो, ७० भन्दा धेरै जनाको मृ`त्यु